ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်တွန့်ဆုတ်မနေပါနဲ့! Vi tar väldigt gärna emot förslag på vad mer som kan läggas upp här på Holmbygden.se.
Holmes အကြောင်းကိုဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်သို့မဟုတ် Holmare မီဒီယာနဲ့ဇာတ်လမ်းတွေ့သည်?
အဖြစ်မကြာမီဆောင်းပါး link တစ်ခုအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကို Send သို့မဟုတ်သတင်းစာဖတ်ရနိုင်ရေး.
အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကဒီညာဘက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်ပါသည်. ဖြည့်ခြင်းနှင့်တင်ပြ, ရှင်းလင်းသော!
ကျနော်တို့ကို fix Layout အပြင်အဆင်နှင့်တူသော. သငျသညျမဆိုအထူးဆန္ဒကိုရှိပါကရေးရန်, t.ex. link တစ်ခု. ဆို / အခြို့သောကိုက်ညီဓါတ်ပုံတွေကိုပူးတွဲ ကျေးဇူးပြု., ထို့နောက်သတင်းကပိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်း.
ဒါဟာဖို့လည်းဖြစ်နိုင် ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ သတင်းစာသားကိုမှ info@holmbygden.se. တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသင့်လျော်သောရုပ်ပုံများကို attach ကျေးဇူးပြု..
အဆိုပါ website တွင် comments?
သင် website တွင်မှတ်ချက်များရှိပါကဒီရှိသည်ဖို့ကိုချစ်ချင်ပါတယ်. အမှားတစ်ခုခုရှိပါသလား, သင့်လုပ်ငန်းအတွက်ပျောက်ဆုံး “ကုမ္ပဏီများမှ” သို့မဟုတ်အလုပ်မလုပ်ပါဘူးဆို link ကိုလည်းမရှိ? ဒီနေရာမှာထိတွေ့ Get!
သေးငယ်တဲ့နှုတ်ဆက်ခြင်းဒါမှမဟုတ် website တွင်သေးငယ်တဲ့ခြေရာကိုစွန့်ခွာချင်?
တစ်လိုင်းရေးသားဖို့ကွိုဆို အဆိုပါ guestbook. တစ်ဦးအသစ်ရေးဆွဲရာတွင်ဘ်ဆိုဒ်ကိုပို့ပါ. အားလုံးအကြံပြုချက်များကြိုဆိုကြသည်!
သတင်းအပေါ်မာစတာကိုမှပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းစကား (website တွင်တင်ထားကြသည်မဟုတ်):
ရုပ်ပုံ 1. ဓာတ်ပုံတစ်ပုံတွဲပေးပါ(ဖြစ်)/အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖိုင်တွေ:
ရုပ်ပုံ3(လိုအပ်ခဲ့လျှင်ပုံစံအကြိမ်ပေါင်းများစွာကိုသုံးပါ):
PS. အသစ်ကအဆိုပြုချက်ကိုပေးပို့ခြင်းပြီးနောက်လည်း Holmes ခရိုင်၏ shared ပြက္ခဒိန်တစ်ခုတိုတောင်းသောပြက္ခဒိန်မှတ်ချက်ရေးသားနိုငျ. သငျသညျအပြီးစနစ်များကိုအလိုအလျှောက်နှင့်ဆက်စပ်ပါလိမ့်မည်ဘယ်မှာ 10 သငျသညျကလစ်နှိပ်ပြီးနောက်စက္ကန့် “ပေးပို့”.